MASSOB adọọ ndi Fulani na-achi ehi aka na nti | odumblog
posted on Jun. 24, 2019 at 7:16 am June 24, 2019
Ọchịchị nke Movement for the Actualization of Sovereign State of Biafra (MASSOB) n’izu ụka a adọọla ndi Myetti Allah Cattle Breeders Association (MACBAN) aka na ntị gbasara otu ndi nche ha chọrọ ihibe n’ala Igbo.
Ha kwuru nke a n’akwụkwọ ozi nke onye ntụziaka nke mgbasaozi binyere aka ya wee zigara ya ndi Daily Post n’Abakaliki.
Ha kwuru na ha achọghị ka ndi MACBAN mepụta otu ndi nche n’ala Biafra. Nke a ka ha kwuru na-akpasu ha iwe ma na-akparịkwa ha. Ha kwuru na ụdị atụmatụ a bụ ka e nwee ike imeri ma chịwakwa ndi bi n’ọwụwa anyanwụ dika nna ha ochie, Othman Dan Fodio siri nye ha iwu.
Ndi MASSOB kwuru na ha chọrọ isi n’ụzọ inye nchekwa memila ndi Igbo. Ha kwuru na inabata ndi iro ha ka ha bụrụ ndi nche dịka ebe ndi Igbo na-egbu onwe ha.
Ha chetakwaara ndi mmadu ka ndi na-achị ehi siri zuo ndi ebu n’ụgbọ ala ohi ma dina ndi nwanyi n’ okporoụzọ si Agbani-Ugbọka di na Nkanu Lokal Gọọmenti, Enugu Steeti, n’ụbọchị Tọzde iri na otu nke ọnwa Juun.
Ha sịrị na ọ bụrụ na ha na-enye nchekwa, ha gawa na Zamfara, Maiduguri ma ọ bụ Katsina ebe ndi Boko Haram na-akpa ike, n’ihi na a na-esi n’ụlọ mara mma were pụta ama.
Ndi uwe ojii akpochiela nwoke zuru ohi n’Ogun Steeti